အသက်အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိလွန်းလှတဲ့ သမီးလေးကို ဗီဒီယိုလေးခိုးရိုက်လိုက်တဲ့ ဖေဖေစိုင်းလွှမ်း – XB Media Myanmar
အသက်အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိလွန်းလှတဲ့ သမီးလေးကို ဗီဒီယိုလေးခိုးရိုက်လိုက်တဲ့ ဖေဖေစိုင်းလွှမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်ကို အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပေမယ့်ဘာသာရေးအရမ်းလုပ်သူဖြစ်တာကြောင့် လူကြီးတွေရဲ့ချီးကျူးမှုတွေကိုရရှိထားသူလေယပါနော်။ အမေနဲ့အတူမနေ ခဲ့ရပေမယ့်အဖေ့ရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်သိပ်ကိုလိမ္မာရေးခြားရှိလွန်းပါတယ်နော်။
သီလရှင်လည်းမကြာခဏဝတ်လေ့ရှိပြီး နေ့စဉ်မပျက်မကွက် ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်ကြောင့်အဖေ ဖြစ်သူစိုင်းလွှမ်း မှာ သူ့သမီးလေးကြောင့်အမြဲဂုဏ်ယူနေရပါတယ်နော်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို မကြိုက်တဲ့စစ်လွန်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံ တင်ပေး တတ်ပါတယ်နော်။
” နောက်ကချောင်းရိုက်တာမိသွားတာလူရောဖုန်းရော လန့်သွားတယ်သာဓုတောင် မခေါ်လိုက်ရဘူး 🥺သာဓုသာဓုသာဓု🙏🙏🙏Sai Hlawn Sis Loon Wati Htet ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ တင်ပေးလာတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အားပေးကြည့်ရှုကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် ပရိသတ်ကြီး….
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထက္ထက္မိုးဦးရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာသမီးေလး စစ္လြန္းဝတီထက္ကို အားလုံးသိၾကမယ္ထင္ ပါတယ္ေနာ္။ ငယ္႐ြယ္သူျဖစ္ေပမယ့္ဘာသာေရးအရမ္းလုပ္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ လူႀကီးေတြရဲ႕ခ်ီးက်ဴးမႈေတြ ကို ရရွိထားသူေလယပါေနာ္။ အေမနဲ႔အတူမေန ခဲ့ရေပမယ့္အေဖ့ရဲ႕ဆုံးမသြန္သင္မႈေအာက္မွာေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့အ က္သိပ္ကိုလိမ ၼာေ ရးျခားရွိလြန္းပါတယ္ေနာ္။
သီလရွင္လည္းမၾကာခဏဝတ္ေလ့ရွိၿပီး ေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ ဘုရားဝတ္ျပဳတဲ့သမီးေလး စစ္လြန္းဝတီထက္ေၾ ကာင့္အေဖ ျဖစ္သူစိုင္းလႊမ္း မွာ သူ႔သမီးေလးေၾကာင့္အၿမဲဂုဏ္ယူေနရပါတယ္ေနာ္။ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တာကို မႀကိဳက္တဲ့ စစ္လြန္းရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္းတစ္ခါတစ္ရံ တင္ေပး တတ္ပါတယ္ေနာ္။
” ေနာက္ကေခ်ာင္း႐ိုက္တာမိသြားတာလူေရာဖုန္းေရာ လန႔္သြားတယ္သာဓုေတာင္ မေခၚလိုက္ရဘူး 🥺သာဓုသာဓုသာဓု🙏🙏🙏Sai Hlawn Sis Loon Wati Htet ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ႔ တင္ေပးလာတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို အားေပးၾကည့္ရႈၾကဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္ ပရိသတ္ႀကီး….
သီလရှင်တစ်သက်လုံးဝတ်လိုက်ပါလာဆိုပြီး သူမဘဝကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေတဲ့သူအား ထိမိနာကျင်စေတဲ့စ ကား လုံးတွေနဲ့တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ စူးရှထက်
မအူဝဲ တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါဆိုတဲ့ အကြားအမြင် ဆရာကြီး မြင့်မိုရ်ထွန်း (တိုကျို )